Ukungcola Kokwenza Umquba - Isikhungo se-EcoTechnology
Ukudla okonakele kuyakha ngaphezu kwama-20% omfudlana kadoti oqinile kamasipala e-United States. Iningi lalokhu kudla okungasetshenziswanga kugcina sekungukugcwaliswa komhlaba, cishe kuphela 4% walokhu kudoti kokudla iya emqubeni. Lolu wudaba ngoba njengoba ukudla kubola ekugcwalisweni komhlaba, kudlula inqubo ye-anaerobic, lapho kukhipha khona i-methane, igesi enamandla abamba ukushisa.
Ukuphambukisa ukudla okusaphazwa nokunye okuphilayo, njengamaqabunga nokusikwa kotshani, kokulahlwa kukadoti akugcini nje ngokunciphisa ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa, kepha kusindisa nezinsizakusebenza. Ukulandela i- Isigungu Esiphezulu Sokubuyiselwa Kokudla kwe-EPA, ukudla kufanele kuqale kuncishiswe emthonjeni ngangokunokwenzeka, bese kudluliswa ukuze kuphakwe abantu abalambile okwesibili, bese iya kondla izilwane okwesithathu, bese kusetshenziselwa ukugaya i-anaerobic nezinye izinqubo zezimboni okwesine, bese kuba umquba wesihlanu. Indawo yokugcina neyokugcina yesithupha yale nsila yokudla ukugcwaliswa komhlaba.
Ake sibhekisise kakhudlwana isigaba sesine nesesihlanu salesi sikhundla sabaphathi ngokuseduze. Ukugaya i-Anaerobic wephula izinto eziphilayo usebenzisa ama-microbes endaweni eyi-anaerobic (oxygen-free). Kunemikhiqizo emibili eyenziwa yile nqubo: i-methane nokuchitshiyelwa kwenhlabathi. I-methane iyabanjwa futhi isetshenziselwe amandla, kanti ukuchitshiyelwa kwenhlabathi kungasetshenziswa emapulazini njengomanyolo.
Isigaba sesihlanu sabaphathi sigcwele umquba. Ukwenza umquba yinto engenziwa yinoma ngubani futhi kusiza kakhulu ngoba kuguqula lolu daba oluphilayo lube yisichibiyelo senhlabathi esibalulekile (empeleni umanyolo). Lo mkhiqizo ophelile, obizwa nangokuthi "igolide elimnyama," muhle ukuwusebenzisa ezingadini, emagcekeni, nasezitshalweni zendlu yakho. Inikeza izakhamzimba ezengeziwe ezizokwenza izitshalo zakho zibe nempilo enhle futhi zizisize zikhule. Ukwenza umquba nakho kuyasiza ngoba kunciphisa izindleko zokulahla. Ungakwazi umquba ekhaya, kungaba ngaphakathi noma ngaphandle. Ukwenza umquba ngaphakathi, ungazama lindokuhle. IVermicomposting isebenzisa izikelemu, imisundu ejwayelekile ebomvu, nezinye izinto ezincane ukuguqula imvuthuluka yekhishi lakho nemfucuza yegceke ibe yigolide elimnyama. Ukusetha uhlelo lwe-vermicomposting kuyajabulisa futhi kulula!
Ukwenza umquba ngaphandle, setha umgqomo okungenani ongu-3 ft x 3 ft x 3 ft. Ungazakhela eyodwa (kunemibono eminingi nezinhlelo eziku-inthanethi zemigqomo ye-compost ye-DIY) noma uthenge eyodwa, njengesihlanganisi selanga. Qala ngokungeza ungqimba lwama- "browns," okungamaqabunga akho omisiwe, utshani, izingodo zezinkuni, nezinye izinto zekhabhoni. Okulandelayo, engeza eminye "imifino," okuyizinsalela zakho zokudla, ukusikwa kotshani, nezinye izinto ze-nitrogen. Isilinganiso esingu-3 kuye ku-1 sombala onsundu nemifino sizoqinisekisa indawo efanelekile yokuthi amagciwane akwazi ukubola kahle izinto eziphilayo. Qiniseka ukuthi umquba umanzi ukusiza ukubola, futhi uvuse inqwaba ngezikhathi ezithile ngokuxuba noma ngokujika ukuze unikeze umoya-mpilo.
Zama ukufaka umquba ekhaya futhi ubuke i-webinar yethu ukuze ufunde kabanzi!
I-CET ibingumholi wezixazululo zokudla ezichithwa iminyaka engaphezu kwengu-20. I-CET yakhelwe futhi isebenza Nokusebenzisa kabusho imikhiqizo esisebenzileWorks MA, uhlelo olwawina imiklomelo lokuchitha usizo lokudla eMassachusetts. Izixazululo Zokudla Okudliwe yi-CET nazo zinikela ngezinhlelo zokwakhiwa kanye nezinsizakalo zokwenza konke iNyakatho-mpumalanga ye-US nangale kwayo, kanye nezinsizakalo zokubonisana nokwehliswa kwemfucuza ukuhlinzeka ngolwazi nezeluleko kuzwelonke.
Ngo-Ephreli 26th, i-2021 | 0 Amazwana
Izindlela Ezi-10 Zokugubha Usuku Lomhlaba!